Wasiirka Caafimaadka oo ka warramay adeegyo lacag la’aana oo lagu soo kordhiyey Cusbitaalka guud ee Hargeysa | Berberanews.com
Home WARARKA Wasiirka Caafimaadka oo ka warramay adeegyo lacag la’aana oo lagu soo kordhiyey...
Wasiirka Caafimaadka oo ka warramay adeegyo lacag la’aana oo lagu soo kordhiyey Cusbitaalka guud ee Hargeysa
Hargeysa-(Berberanews)- Wasiirka Wasaarada Caafimaadka Somaliland Dr.Xuseen Maxamuud Muxumed (Xuseen-Xoog) oo shir Jara’id maanta ku qabtay xarunta Wasaaradda ee magaalada Hargeysa, ayaa sheegay in Cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa meeshii ugu fiicnayd intii ay Somaliland jirtay uu maanta marayo.
Wasiirka Caafimaadka Somaliland, waxa uu si adag u beeniyay wax uu ugu yeedhay hadal aan Xaqiiqda ku dhisnayn oo ay Faafiyeen qaar ka tirsan Warbaahinta dalku oo ay wax kaga sheegayaan adeegga Cisbitaalka guud ee Caasimadda Hargaysa.
Waxaa shirkaasi Jara’id ku weheliyey Wasiirka Masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda,Dhakhaatiir ajaanib ah oo ka hawl gala Cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo Guddida Madaxa-bannaan ee maamusha Cisbitaalka.
Wasiirka Wasaarada Caafimaadku waxa uu Xusay in ujeeddada shirkan Jaraa’id ay la xidhiidho hadallo Maalmahan ku soo baxayay Warbaahinta gudaha, gaar ahaan Wargeysyada ay ka midka yihiin, Haatuf iyo Saxansaxo oo siyaabo qaldan wax uga qoray Cisbitaalka guud sida uu ku dooday Wasiirku. Kuwaasoo baahiyey in habacsanaan baahsani ay ka muuqato Cisbitaalka, hase yeeshee waxa uu Wasiirka Caafimaadku wararkaa ku tilmaamay kuwo xaqiiqada ka fog.
Geesta kale, Wasiirku waxa uu ka warbixiyay Waxqabadkii wasaarada Caafimaadka Mudadii Sanadka iyo Badhka ahayd ee u dambeysay,waxa kale oo wasiirku Tilmamaay in Dhaqaatiir badan oo Ajaniba ah Isla markaana Madashaas ku sugnaa ay wadanka u yimaadeen inay Adeegyo Caafimaad oo u badan Lacag la’aan ka fuliyaan.
Wasiirka Caafimaadka waxa uu si gaar ah u tilmaamay Mar uu ka hadlayay dhinaca talaalka in qaar ka mid ah Saxaafadu ay si khaldan u tabiyeen dhawaan mar uu ka hadlay arimaha la xidhiidha Xanuunka Booliyada,taas oo ku sifeeyay mid la majaro habaabiyay,isagoo intaas ku daray in Maanta uu Cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa taaganyahay halkii ugu Fiicnayd tan iyo Xiligii Gumaysigii Ingriiska.
Wasiirku Wasaarada Caafimaadku waxa uu sheegay in Wasaaradiisu ay Bilowday inay u fidiso Adeeg qaliin oo lacag la’aan ah Hooyooyinka ay ku Dheeraato waqtiga Dhalmadu,waxaa kale oo uu daboolka ka qaaday in markii u horaysay ay bilaash ama lacag la’aan ay ka dhigeen Qaliinada lagu sameeyo hooyooyinka fooshu ku raagto taas oo uu ku sheegay fursad aad u wanaagsan.
Waxa kale oo halkaasi Ka hadlayay Masuuliyiin ka Tirsan Gudida Madaxa bannaan ee Cisbitaalka Guud ee Caasimada Hargaysa kuwaas oo dhamaan sheegay sida ay ugu Faraxsanayahiin Hawlaha Caafimaad ee wakhti Xaadirka ka socdo Cisbitaalka Guud ee Magaalada Hargeysa.
Previous articleKhabiirro Caalami ah oo Qoraal ku soo Bandhigay Aataarka Qadiimiga ah ee Somaliland Ku Duugan
Next article“Waxaan ku kalsoonahay shanta sanno ee u horraysay Guddoomiye inaad Dadweynaha gobolka Saaxil bisil u qorayso.”Wakiilka weftigii Gobolka Saaxil uga qaybgalay shirweynaha Wadani Cabdishakuur Cidin.Video